Tag: muuqaal muuqaal ah | Martech Zone
Tag: muuqaal muuqaal ah
Waxaan wada maqalnay in sawirku u qalmo kun eray. Tani ma noqon karto mid runta maanta ah maadaama aan markhaati ka nahay mid ka mid ah kacdoonnadii ugu xiisaha badnaa ee isgaarsiinta ee xilliyada oo dhan – mid sawirradu sii wadaan inay beddelaan erayada. Qofka celceliska ahi wuxuu xusuustaa keliya 20% waxa uu akhriyey laakiin 80% waxa uu arko. 90% macluumaadka loo gudbiyo maskaxdeena waa muuqaal. Taasi waa sababta nuxurka muuqaalku u noqday habka keliya ee ugu muhiimsan
Saturday, April 14, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Bishan waxaan leenahay 2 sawirro ah oo lala galayo macaamiisha, fiidiyow aan duuliye wadin, iyo fiidiyoow hoggaamineed oo feker ah… dhammaantood si loo habeeyo bogagga iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin macaamiisheenna. Mar kasta oo aan ku kala beddelno muuqaallada saamiyada iyo fiidiyowga bogagga macaamiisha oo aan ku beddelno sawirrada shirkadooda, shaqaalahooda, iyo macaamiishooda… waxay beddeleysaa goobta, hawlgelinta iyo beddelaaduna way sii kordhayaan. Waa mid ka mid ah waxyaabaha khiyaanada leh ee aanaan si gaar ah u aqoonsan karin markaan aragno goob, laakiin
Jimco, Juun 24, 2015 Jimco, Juun 24, 2015 Douglas Karr
Miyaynu ku qaylin wax ku filan oo ku saabsan waxyaabaha muuqaalka ah? Uma maleynayo sidaas. Waxaan horey u wadaagnay dhowr faahfaahin oo ku saabsan sheeko sheeko muuqaal ah iyo sida looga faa'iideysto noocyo kala duwan oo ah muuqaalka muuqaalka ah inay sii ahaadaan kuwo waxtar leh. Waxaan u sharraxayay nidaamkan tafaariiqle maxalli ah toddobaadkan runtiina waxay haysteen waqti adag oo ay rumaysan yihiin saameynta waxyaabaha maalinlaha ah ee muuqaalka lagu wadaago ee internetka ka caawin kara ganacsigooda. Intaan joogay, waxaan qaatay 10
Awoodda Suuqgeynta Macluumaadka… Digniin ah
Axad, Oktoobar 5, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Daabacaaddan iyo inta badan shaqada aan u qabanno macaamiisha waxay ku lug leedahay waxyaabo muuqaal ah. Waxay shaqeysaa… dhagaystayaasheena ayaa si aad ah u koray iyadoo xooga la saarayo waxyaabaha muuqaalka ah waxaan sidoo kale ka caawinay macaamiisheenna inay kobciyaan gaadhitaankooda iyagoo leh muuqaal muuqaal ah qayb ka mid ah isku dhafka. Tani waxay ku jirtaa qaab muuqaal ah oo ay 'Media Domination Media' u sameysay inay ku muujiso awoodda waxyaabaha muuqaal ahaan ah Ma aha wax qarsoodi ah in macaamiisha ay si fiican uga jawaabaan suuqgeynta muuqaalka ah, waana tan
Axad, Juun 22, 2014 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Anigu kama soo horjeedin xayeysiinta iyo bixinta dallacsiinta, laakiin milkiileyaal badan oo ganacsi iyo xitaa kuwa suuqleyda ah ma kala soocaan farqiga. Badanaa, suuqgeynta bulshada waxaa loo arkaa inay tahay kanaal kale. In kasta oo ay tahay istiraatiijiyad dheeri ah oo lagu daro suuqgeyntaada, bulshada waxay siisaa fursad aad uga duwan. Warbaahinta bulshada ayaa carqaladeynaysay muuqaalka xayeysiinta tan iyo markii ay ku soo duushay goobta waxayna soo bandhigtay jaangooyooyin la raadin karo oo ay suuqleydu kaliya ku riyoodeen. Iyada oo